Ukubhukha ukwelashwa kwakho kude ngomhla ka-23 Ephreli 2022 – JucelinoLuz
Ukubhukha ukwelashwa kwakho kude ngomhla ka-23 Ephreli 2022
Ukushuba kwesimo nokucasulayo kule ntwasahlobo enyakazayo?
Izinhlungu, izinhlungu noma izifo?
Udinga ukuzwana, ukuphulukiswa noma inkululeko?
Uma unamandla, ukungalingani ngokomzimba, ngokomzwelo noma ngokomoya, omunye wabelaphi abakhulu e-Brazil ukulungele, ekhaya, kanye nawe, ngokunakekelwa okukude, ngemuva kokuthulula izifo zakho kuye.
U-Jucelino da Luz ukubekele usuku lwangomhla zingama-23 kuMbasa futhi uza kuwe enamandla amakhulu okuphilisa asesebenze nawo iminyaka engu-52.
Ngesikhathi sokwelashwa, uzokuthumela ingqamuzana lokukhanya elizoqhubeka lidlula emzimbeni wakho, ukuze liphinde livumelanise lokho okudingeka ukuvumelanisa futhi uzothola impendulo evela ku-Jucelino nge-imeyili, ngendlela yesincomo esivela ku- Odokotela bezulu asebenza ngabo.
chofoza umbhalo, ngesiFulentshi, isixhumanisi sokugcina:
Đặt trước điều trị từ xa của bạn vào ngày 23 tháng 4 năm 2022